को हुन् ९ अगाडी ६ थपेर ६९ नम्बर बनाउँदै गोल्ड मेडल हान्ने 'भाइरल' पात्र ? | Diyopost
को हुन् ९ अगाडी ६ थपेर ६९ नम्बर बनाउँदै गोल्ड मेडल हान्ने ‘भाइरल’ पात्र ?
मा प्रकाशित 774 पटक हेरिएको
काठमाडौँ, असार १४ । पाटन संयुक्त क्याम्पसमा मानविकी संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेको सुरेन्द्र कोइरालालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गोल्ड मेडल प्रदान गर्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यलय अन्तर्गत गोप्य शाखाका प्रमुख रामु कर्माचार्यबाट तीन वटा विषयमा नम्बर थप गराएर कोइरालाले गोल्ड मेडल हत्याएको खुलाशा भएको छ ।
अर्थशास्त्रबाट गोल्ड मेडल दिलाउन तीनवटा विषयको उत्तरपुस्तिका र क्याम्पसले दिने मार्कसिटको नम्बरमा फरक पारिएको तथ्य बाहिरिएपछि कोइराला अख्तियारको हिरासतमा छन् । कोइरालालाई क्याम्पसले प्रदान गर्ने मार्कसिटमा नम्बर बढाएर दिइएपछि पनिकाले पनि नम्बर बढाएको खुलेको छ । उनले एक विषयमा ९ अंकमात्र प्राप्त गर्दा विचौलियाले अगाडी ६ थपेर ६९ बनाएपछि गोल्ड मेडल पाएका हुन् ।
चारवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरिसकेका कोइराला पेसाले अधिवक्ता हुन् । उनको काठमाडौँको अनामनगरमा कोइराला एण्ड कम्पनी नामक ल फर्म संचालनमा रहेको छ । उनले अन्य विषयमा समेत कीर्ते गरेर नै स्नातकोत्तर हाँसिल गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । यस विषयमा त्रिविले पनि विशेष अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कीर्ते प्रमाणपत्रको आधारमा त्रिविले गोल्ड मेडल दिएको खबर संचार माध्यमहरुमा आइसकेपछि परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयले प्राध्यापक अनुपकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो । सोही समितिको प्रारम्भिक छानविनको क्रममा नम्बर थप गरेर गोल्ढ मेडल दिएको खुलाशा भएको हो । नतिजा प्रकाशनको शुरुमै त्रुटि गरिएको कारणले पनिकालाई पनि यसबारेमा थाहा नभएको उनिहरुले बताएका थिए ।
गोल्ड मेडल हाँसिल गर्न कोइरालाले कर्मचारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको भेटिएको छ । उनले सो मेडल हत्याउनको लागि कर्मचारीहरुलाई मिलाउन मात्रै पाँच लाख खर्च गरेको बताइएको छ । एउटा विषयमा पास गराउनको लागि कम्तिमा पनि पचास हजार आवश्यक हुने स्रोतले जनाएको छ । आफुलाइ गोल्ड मेडलिस्ट बनाएर राष्ट्रपतिको हातबाट सम्मान प्राप्त गर्ने रहरमा उनले परिक्षा नियन्त्रण कार्यलय बल्खु गोप्य शाखाका प्रमुख रामु कर्माचार्यलाई प्रभावमा पारेका थिए ।
गोल्ड मेडल लिने र दिलाउनेलाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको छ । अख्तियारको अनुसन्धानबाट यस कार्यमा विद्यार्थी नेतादेखि ठुलो गिरोह सक्रिय रहेको पत्ता लागेको छ ।
फेल भएकालाई पास गराउने र कम अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई अंक थप्ने आफुले सजिलै नम्बर हेरफेर गरिदिन सक्ने भन्दै आश्वस्त बनाएर कर्माचार्यले पैसाको डिल गरेका थिए । कर्माचार्यले विगतमा पनि त्यसरु धेरैैलाई गोल्ड मेडलिस्ट बनाइसकेको दावि कोइरालासंग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ । पनिकाका सब कर्मचारीसँग आफुले सेटिङ मिलाइदिने भन्द उनले डिलिङ गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।